China RGB Dynamic LED Panel vagadziri uye vanotengesa | Huayuemei
Chinhu RGB Dynamic akatungamira Panel
Tsanangudzo 240 * 240 * 1.6mm
Kukura kwe LED SMD5050
Akatungamirira Qty 64PCS
Ruvara rwemavara RGB
Simba 36w / bv
1.Simbisa yako yekumaka & kushambadzira
Munyika yanhasi ine simba, kushambadzira kwako uye kushambadzira kunoda kumira nehunyanzvi uye zvinhu zvinoshamisa. Izvo zvakakosha kushandisa bhajeti yako zvine hungwaru usingakanganise pakufungidzira uye kutanga. Iwo mikana iyo iyo HYM Dynamic LED mapaneru inopa haigume. Nekungochinja zvirimo uye nekuratidzira zvikamu zvekudhinda kwako, iwe unogadzira yakatarisa yakatarisa uye unzwe neiyo chaiyo yakafanana graphic.
Kutenda kune ine simba lightbox, yako mhando inomira munzvimbo inoonekera. Iishandise uye simba kumusoro kwako-muchitoro uye kunze-chitoro zviratidzo zviratidzo.
2. Makomborero eDynamic LED Panel
• Inogona kugadziriswa neK-8000C Kadhi yekudzora neDMX512 propotol.
• Kujekesa kwakafanana.
• Nyore kuisa mubhokisi rako rakajeka kana celling.
Shingairira vateereri vako kuburikidza nekunakidzwa uye yakasarudzika Brand Zviitiko.
• Nyore-kuvaka-modular dhizaini
• Nyore shanduko yekudhinda uye kurodha yevhidhiyo mifananidzo
3. Nemabhodhi ayo akarongwa eRGB akatungamira, iyo RGB inogona kumisikidzwa kumamirioni gumi nemazana manomwe neshanu akasiyana .Iyi yakasarudzika tensioning system inosanganisirwa nyore nyore mune ako RGB magetsi ekugadzira kupa yunifomu mwenje mune chero ruvara. Imwe neimwe LED iri RGB, izvi zvinoreva kuti ivo vanogadzira Ruvara Rutsvuku, Girinhi neBlue iro kana rikabatanidzwa, rinogona kugadzira chero ruvara mune iyo spectrum,
4. Tichifunga nezvekuchinja uku mukushandurwa kwemavara uye kugadzikana, tinokwanisa kugadzira zvirongwa zvakaomarara zve LED zvinosanganisira kungovhara / kudzima, kudzikira uye kupenya uye shanduko yemavara inogona kunyatsounza mufananidzo wejira rakadhindwa kuhupenyu.
Dynamic 'lightbox inogona kukwidziridzwa pamadziro, yakamira mahara netsoka, yakavakirwa mukati kana yakaturikwa tambo. Inogona kuve yakagadzirirwa kure zvakare, bhokisi rega rega rinogona kubatanidza kune yemuno isina waya netiweki uye chirongwa chitsva chinogona kutapurirwa kwachiri kana nyowani dhizaini dhizaini yavepo.
Iyo inoshandira kushambadzira machira emwenje bhokisi & kutambanudza maseringi, zvakare inyorera cheni chitoro, hotera, zvitoro, subway, airport, chiteshi etc.
Pashure: Yakakwira simba Edge-yakavhenekerwa LED Strip Chiedza
Zvadaro: RGB Dynamic Curtain LED Strip
Yakasimba Led Module
Yakasimba Led Panel
Simba Rakachena Rakatungamira Module
Rgb Dynamic Yakatungamira Panel
Inogadzirirwa LED Panel yejira jira bhokisi